रवि र करिश्माको सम्बन्ध ऋषिको ‘धमलाको हमलामा’ छताछुल्ल (भिडियोसहित) - Purbeli News
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पौष २४, २०७५ समय: २१:१९:२०
टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने र उनकी पूर्वपत्नी इशा लामिछानेको विवाद यसपटक सार्वजनिक भयो । रवि लामिछानेसँगको सम्बन्धबारे एक अनलाईनसँग कुराकानी गर्दै पूर्वपत्नी इशाले एक अंशमा भनेकी छिन्, ‘म अमेरिका गएपछि रविजी ति महिलासँग टाढिनुभयो । दुवैजना विवाहित भएकोले सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन सजिलो पनि थिएन उहाँहरुलाई । म अमेरिका गएलगत्तै ती महिला रविजीसँग रिसाएर नेपाल फर्किनुभएछ ।
जहान–परिवारवाली प्रतिष्ठित (अहिले ‘प्रतिष्ठित’ हटाएको) व्यक्ति भएको हुनाले म ती महिलाको नाम लिन सक्दिनँ ।’ इशाले नेपालकी प्रतिष्ठित र जहान–परिवारवाली भनेर कसलाई भनेकी हुन् त ? उनले यति सूचनाबाहिर ल्याएपछि मिडिया क्षेत्रमा ति महिला फिल्म नायिका करिश्मा मानन्धर हुन् भनेर चर्चा हुन थाल्यो । तर कसैको नाम लिएर टिकाटिप्पणी गर्नु शोभनीय हुँदैन । सम्बन्ध रहेकै भए पनि निजी मामिला उचालेर कसैको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु अझै असभ्य हुन सक्छ । संयोग कस्तो पर्‍यो भने, पत्रकार ऋषि धमलाले तीन वर्षअगाडि आफ्नो कार्यक्रम ‘धमलाको हमला’मा यहि कुरा उठाएका रहेछन् ।
यो विषयवस्तु यतिबेला ‘स्याल पनि कराउनु, बाख्रा पनि हराउनु’ जस्तै गरी जोडिन पुगेको छ । कार्यक्रममा धमलाले करिश्मालाई सोध्छन्, ‘तपाईं अमेरिकामा रवि लामिछानेसँग बस्ने गरेको चर्चा थियो नी ?’ जवाफमा करिश्माले भन्छिन्, ‘म अमेरिका बस्दा रविसँगै किन बस्नु पर्‍यो ? म एक्लै बस्थेँ । उहाँ मेरो सबैभन्दा नजिकको साथी बन्नु भयो । मेरो सबैभन्दा नजिकको सहयोगी साथी हुनुभयो । उहाँ कार्यक्रम क्लापमा काम गर्ने हाम्रो स्टाफ पनि हो । ’ अर्को प्रश्न गर्छन् धमलाले । सोध्छन्, ‘तपाईंले अमेरिकामा हुँदा रविजीसँगको मायामा परेर विनोद मानन्धरलाई बिर्सनु भयो रे नी हो ?’ करिश्माले जवाफ दिन्छिन्, ‘विनोदजीलाई म त्यस्तो सम्झिन्न । बाहिर भएजस्तो चर्चा साँचो होइन । रविजी मेरो असल साथी मात्रै हो ।’ नेपाल अाजबाट